बहस : ‘प्रतिबन्ध’ ठिक कि बेठिक ? कांग्रेसको आधिकारीक धारणा चैत्र ४ मा – Kalika News
बहस : ‘प्रतिबन्ध’ ठिक कि बेठिक ? कांग्रेसको आधिकारीक धारणा चैत्र ४ मा
"ढुंगाना भन्छन : हचुवाको भरमा निर्णय गरियो "
२ चैत्र २०७५, शनिबार १२:२९ , मा प्रकाशीत
नेत्रबिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (सराकारको भाषामा ‘बिप्लव समुह’) माथी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछी यो निर्णय विवादमा परेको छ । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष यो निर्णयमा बिभाजित देखिएका छन । पार्टीभित्र एकपटक छलफल समेत नगरी दुरगामी महत्व राख्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपि ओलि पुनः एकपटक विवादमा परेका छन । यस्तै नियती प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भोग्ने संकेत देखा परेको छ । देउवाले प्रतिबन्ध ठिक छ भनेर केहिदिन अघि बोलेका थिए । तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता भने निर्णय बेठिक भन्दै हिडेका छन । सरकारको २ निर्णय (बिप्लवमाथिको प्रतिबन्ध र सिके राउतसङ्गको सहमती)बारे आधिकारिक धारणा बनाउन कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक यहि चैत्र ४ गते सोमबार बस्दैछ । कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के आउला ? सबैको प्रतीक्षाको बिषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर हामिले तत्कालीन संविधान सभाले गठन गरेको उच्चस्तरीय वार्ता टोलिका संयोजक , पुर्व-मन्त्री एवं कांग्रेसका प्रभावशाली नेता आनन्द प्रसाद ढुंगानासंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कालिकाकर्मी राजु सापकोटाले ढुंगानासंग गर्नुभएको कुराकानी :
नेत्रबिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (सराकारको भाषामा ‘बिप्लव समुह’) माथी सरकारले लगाएको प्रतिबन्धमा तपाईंको धारणा के छ ? जे जति आधार प्रस्तुत गरिएका छन , ती पर्याप्त हो ?
सरकारले जे निर्णय गर्‍यो, त्यो गलत निर्णय गर्‍यो । बिना गृहकार्य गरिएको निर्णय हो यो । भर्खरै मात्र हामी द्वन्दबाट बाहिर निस्केर , नयाँ संविधान बनाएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढ्दैछौ , यस्तोमा ‘प्रतिबन्ध’ संबन्धी निर्णयले आश्चर्यचकित बनायो । सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति त बनायो , तर अधिकारबिहिन समिति बनायो । जति अधिकार दिनुपर्थ्यो त्यो दिईएन । फलत: समितिले समिति बिफल भयो । बिगतमा मेरो संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिबेदनलाई समेत लत्याउने काम भयो । हामिले परिस्थिति मुल्यांकन गरेर १/१ उल्लेख गरेर प्रतिबेदन बुझाएका थियौं । तर सरकारले त्यसलाई लागू गरेन । जुन दु:खद छ ।
उसो भए यो निर्णय हचुवाका भरमा सरकारले गर्‍यो भनेर कसैले बुझ्छ भने त्यो सहि बुझाई हो, तपाईंको बिचारमा ?
एकदम सहि बुझाई हो त्यो ! दीर्घकालीन सोचाइ नराखी, देशलाई प्राथमिकतामा नराखी सरकार अघि बढेको देखियो । समस्या छ भने त्यसको बारेमा जनतासंग बिश्वास लिन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षलाई पनि बिश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका सम्पुर्ण दलहरुलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्थ्यो । बिडम्बना सकेन । सरकारको गृहकार्य नै पुगेन । हचुवाको भरमा निर्णय गर्‍यो ।
प्रधानमन्त्री केपि ओलि र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको हत्या गर्ने योजना ‘बिप्लव’ समुहले बनाएको भन्ने सुचना त बहिरिएको छ त , स्वयं नेकपा अध्यक्षद्वयले नै यी कुरा भन्दै हिड्नुभाछ त , यी कारण प्रतिबन्धका लागि पर्याप्त होइनन ?
यदि त्यस्तो कठिन अवस्था नै आएको थियो भने त्यो सम्पुर्ण यथार्थ कुरो जनतासामु राख्न सक्नुपर्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षीसंग भन्नुपर्थ्यो , राजनीतिक सहमती जुटाउनुपर्थ्यो । ‘बिप्लव’ समुहले यसो-यसो गर्दैछ , के गरौं भनेर सुझाव माग्नुपर्थ्यो, दुखको कुरो त्यो गरिएन । हिजो शान्ति संझौता गर्दा गिरिजाबाबुले के गर्नुभाथ्यो ? सम्झौ । एकातिर राजाको बन्दुक अर्कातिर माओबादीको बन्दुक , २ बन्दुकको बिचबाट कसरी निकाल्नुभाथ्यो उपाय ? संवादबाट भएको होइन र ?
भनेपछी शान्ति सम्झौताका जिवित हस्ताक्षरकर्ता ‘प्रचण्ड’ले सबै बिर्सिए ? तपाईंको आसय त्यही हो ?
होनि ! ‘प्रचण्ड’संग अनुभव छ , खड्क ओलिसंग पनि अनुभव छ । तर त्यो अनुभवलाई उहाँहरुले जनतासामु सेयर गर्न चाहानुभएन । सेयर गरेको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । सरकारले दलहरुलाई बिश्वासमा लिन सकेन । निषेधको राजनीति आजको आवश्यक्ता होईन ।
अहिले राजनीतिक नेतृत्वप्रती जनताको बितृष्णा बढ्दैछ भनिन्छ, यो समयमा जनताको बितृष्णाको फाइदा ‘बिप्लब’ समुहले लिन सक्छ भन्ने एकाथरीको विश्लेषण छ, के छ तपाइँको बिचार ?
फाईदा-बेफाईदा त समयले देखाउला । तर निषेधको राजनीति जुन तवरले भएको छ त्यो राम्रो होईन । यो हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय हो ।
संभावित गृहयुद्धको जोखिमलाई रोक्नको लागि मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले तपाईंहरुको भुमिका के हुन्छ ?
हामी त पहल गर्छौं नि ! हामिले यसअघि पनि द्वन्द्व ब्यवस्थापनको नेतृत्व गरेकै हो । मुलुकलाई शान्ति सम्झौतामार्फत संविधान दिएर अहिलेको अवस्थामा ल्याउने काम हामिले गरेकै हो । मुलुक बनाउने जिम्मेवारी अहिले नेकपाले प्राप्त गर्नुमा पनि हाम्रै योगदान छ । अहिले मुलुक फेरि अर्को भुमरीमा पर्ने संभावना देखिदैछ , हामी नियाल्दैछौ । हामी सतर्क छौं , सजग छौं । हामी मुलुकलाई भड्खालोमा पर्न दिन्नौ ।
‘बिप्लव’ समुहमाथी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको बिरोध गर्ने अधिकार तपाईंहरुसंग छैन भन्दैछन नि केही नेकपाका नेताहरु । बिगत हेर्दा त तत्कालीन अवस्थामा माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने र नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै गरेको देखिन्छ । होईन र ?
तपाईंको मिडिया मार्फत म एउटा कुरो के प्रष्ट पार्छु भने त्यो बेला हरेक निर्णय सहमतिमा भएका थिए । गिरिजाबाबुले संवाद पनि सोही अनुरुप गर्नुभएको थियो । तर आज खड्ग ओलिले गरेको ‘बिप्लव’ समुहमाथी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सर्वदलीय निर्णय होईन , यो एकल निर्णय हो । बिगतमा सर्वसहमतीमा गरिएका निर्णयले राजनीतिक परिवर्तन संभव भएको थियो । अब अहिलेको यो निर्णय जनतालाइ के दिन गरिएको हो ? हामिलाइ थाहा छैन । भविष्यले त पक्कै देखाउला ।
तपाईंको पार्टीमा पनि यो निर्णयमा एकमत देखिएन , सभापति र वरिष्ठ नेताकै मत बाझियो , किन होला ? कसको धारणालाई जनताले आधिकारिक मान्ने ?
व्यक्तिगत धारणा सबैको होला । तर आचिकारिक निर्णय भएको छैन । यहि चैत्र ४ गते सोमबार केन्द्रिय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ , त्यही बैठकबाट कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाउछ । सिके राउतसंग सरकारले गरेको सहमतिबारे पनि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाउछ । तर प्रष्ट रुपमा बुझ्नुस हामी सरकारी निर्णयको बिपक्षमा छौं ।